YouTube	Facebook	http://burmese.nldburma.org/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/405502hluttaw._1_jpg.jpglink
်Empowering Higher Education ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်တက်ေရာက်
ေနြပည်ေတာ်ရှိ သဂင်္ဟ ဟိုတယ်တွင် ယေန့နံနက် ၉နာရီ ၃၀မိနစ်က British Council မှ ြကီးမှုးကျင်းပတဲ့ Empowering Higher Education ေဆွးေနွးပွဲသို့ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်း စုြကည်နှင့် ဗဟိုအလုပ်မှုေဆာင်အဖွဲ့၀င် အြပည့်အစံုသို့
အဖွဲ့ချုပ် ပညာေရးကွန်ရက် ဆရာ၊ဆရာမများကို ဂုဏ်ြပု
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာေရးကွန်ရက် ၏ဆရာ ၊ဆရာမများ အားဂုဏ်ြပုပွဲနှင့် ေ၀ဖန်ပိုင်းြခားြခင်းနှင့် တက်ြကွစွာသင်ယူြခင်းသင်တန်းဆင်းပွဲကို ယေန့နံနက် ၉ နာရီက ေရွှဂံုတိုင်၊ေတာ်၀င်နှင်းဆီစားေသာက်ဆိုင်တွင်ကျင်းပရာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း အေမ့အိမ်ပညာေရးေကျာင်းများမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့၀င်များ အြပည့်အစံုသို့
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ မွန်ဂိုလီးယား နိုင်ငံမှြပန်လည်ေရာက်ရှိ
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှ ြမန်မာနိုင်ငံသို ့ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာရာ ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိမ်သို့ ေမလ ၃ ရက်ေန့ည ၁၀နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ အားနာယက အြပည့်အစံုသို့
၁၂.၄.၂၀၁၃ - ညေနပိုင်းတွင် ရန်ကုန်ြမို့မဂင်္လာဒံုေလဆိပ်မှ ဘန်ေကာက်ြမို့သို့ ထွက်ခွာြပီး ဘန်ေကာက်ြမို့မှ တဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာမည်။၁၃.၄.၂၀၁၃ ရက်ေန့ နံနက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုြမို့သို့ ေရာက်ရိှမည်။၁၃.၄.၂၀၁၃ - ဂျပန်နိုင်ငံရိှ ြမန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် အြပည့်အစံုသို့
၂၀၁၃ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ ၁၅ ရက် မွန်းလွှဲ(၄) နာရီက ေနြပည်ေတာ် လွှတ်ေတာ်အတွင်းရှိ (I_12) ေဆာင်တွင် အဂင်္လန်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း တိုနီဘလဲနှင့် အဖွဲ့သည် အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင် ဆန်းစုြကည်အား လာေရာက်ေတွ့ဆံုခဲ့သည်။ အြပည့်အစံုသို့
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌအား အိန္ဒိယ ေအာက်လွှတ်ေတာ်ဥက္ကဌလာေရာက်ေတွ့ဆံု
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနင့်တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရးေကာ်မတီ ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား INDIAေအာက်လွှတ်ေတာ်ံံဥက္ကဌ Meira Kumar ေခါင်းေဆာင်ေသာ လွှတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ်များ ချစ်ြကည်ေရးအဖွဲ.သည်၁၃.၂.၁၃ ေန့ နံနက် ၁၂း၀၀ ကလွှတ်ေတာ်၀န်းအတွင်းရှိ ရုံးအမှတ် ( I. 1 အြပည့်အစံုသို့
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ရှမ်းြပည်နယ်ေန့ အထိမ်းအမှတ်တက်ေရာက်
အမျိုးသားဒီမုိကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် ေနြပည်ေတာ် သေြပကုန်းေဈးရှိ ေမာဂ်ခမ်းနွံ စားေသာက်ဆုိင်တွင် ကျင်းပသည့် (၆၆)နှစ်ေြမာက် ရှမ်းြပည်နယ်ေန့အထိမ်းအမှတ် မိတ်ဆုံ စားပွဲသုိ့ တက်ေ၇ာက်ခဲ့သည်။ အဆုိပါမိတ်ဆုံစားပွဲကုိ ရှမ်းတုိင်းရင်းသားများ ဒီမုိကရက်တစ်ပါတီမှ အြပည့်အစံုသို့
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဩစေြတးလျ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးနှင့် အဖွဲ့အားေတွ့ဆံုတရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနှင့် တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရး ေကာ်မီတီေရးရာေဆာင်ရုံး( I. 12)တွင် အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ဧည့်သည်ေတာ် ဩစေြတးလျနုိင်ငံ နုိင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး ဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲ့အား၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၀ရက် မွန်းလွဲ(၁၂)နာရီ ... အြပည့်အစံုသို့	ပထမအြကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် သတ္တမပံုမှန်အစည်းအေ၀း ဆဌမေန့အစီအစဉ်ပထမအြကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် သတ္တမပံုမှန်အစည်းအေ၀း ဆဌမေန့အစီအစဉ် ကျင်းပရာ အစည်းအေ၀းတွင် ဦးြကည်တင့် ဓနု	်Empowering Higher Education ေဆွးေနွးပွဲသို့ ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်တက်ေရာက်ေနြပည်ေတာ်ရှိ သဂင်္ဟ ဟိုတယ်တွင် ယေန့နံနက် ၉နာရီ ၃၀မိနစ်က British Council မှ ြကီးမှုးကျင်းပတဲ့ Empowe	အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ မီဒီယာများနှင့်ေတွ့ဆံုအမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ယေန့နံနက် ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ် ခန့်က ေနြပည်ေတ	အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ တရုတ်ေကာင်စီ၀င်နှင့်ေတွ့ဆံုအမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ၂၄.၆.၂၀၁၃ခုနှစ် နံနက် ၁၁း၄၅မိနစ်တွင် တရုတ	အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ (၆၈)နှစ်ြပည့် ေမွးေန့ကျင်းပအမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၏ ၁၉.၆.၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် ကျေရာက်ေသာ (၆၈)နှစ်ြပည့်	အမျိုးသားကျန်းမာေရးကွန်ရက် ကွင်းဆင်းကုသအမျိုးသား ဒီမုိကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသားကျန်းမာေရးကွန်ရက်မှ ဥက္ကဌေဒါက်တာတင်မျိုး၀င်း ဦးေဆာင်ေသာ အထူ	မဟာေအာင်ေြမ ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဆးခန်းဖွင့်ပွဲတက်ေရာက်မန္တေလးတိုင်း မဟာေအာင်ေြမြမို့နယ်ရိှ အဖွဲ့ချုပ် ကျန်းမာေရးကွန်ရက် ြကယ်ြဖူ အခမဲ့ ေဆးခန်း (၁) နှစ်ြပည်	ဒီချုပ်ဥက္ကဌ ြပင်ဦးလွင်ေဒသခံများနှင့်ေတွ့ဆံုအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ယေန့ ေန့လည် ၁၂ နာရီခန့်တွင် ြပင်ဦးလွင်ြမို့သို့ ေရာက်ရှိခဲ့သည	next
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၄)ရက် မွှန်းလွှဲ(၁) နာရီခွဲ က အမျိုးသားဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ် ဌာနချုပ်ရှိ သင်တန်းခမ်းမတွင် ဘဏ္ဍာေရးနှင့် ေငွေြကးဆိုင်ရာ ေဟာေြပာပွဲ ြပုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာ ေရးနှင် ့ေငွေြကးဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဆရာ ဦး၀င်းရှိန်ေမာင်က ေဟာေြပာ ပိ
Saturday, 15 September 2012	Comments
အဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စားလှယ် လက်ပံေတာင်းေတာင် ေြကးနီစီမံကိန်း အေရးသွားေရာက် ကူညီေြဖရှင်း
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ပုလဲြမို့နယ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ် ေဒါ်ခင်စန်းလှိုင်၊ ဗဟိုညီလာ ခံကျင်းပေရး စည်းရံုးေရးဆပ်ေကာ်မတီမှ မံုရွာဦးေအာင်ရှင်နှင့် အဖွဲ့သည် ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂)ရက်ေန့ နံနက်ပိုင်းက မံုရွာြမို့၊ြမို့မ ဂါတ်ေကျာင်း
ြမန်မာနိုင်ငံကွန်ြပုတာ ပညာရှင်များ အသင်းချုပ် (MCPA)မှ ြကီးမှူး ကျင်းပေသာ တတိယအြကိမ်ေြမာက် ဘားကမ့် (Barcamp) ရန်ကုန်၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား​ကို ​ြမန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ Main Building ​ေရှ့ ကွင်းြပင်၌ မနက် ၈ နာရီတိတိတွင် ​ြပုလုပ်ခဲ့ြပီး အခမ်းအနားတွင် ဥက္ကဌ ​
Saturday, 11 February 2012	Comments
အဖွဲ့​ချုပ် လူငယ် မျိုး​ဆက်များ​ ​ေတွ့​ဆံုပွဲ
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကနှင့် ဘုန်းေတာ်ြကီးဒတ်စမွန်တူးတူးတို့ ေတွ့ဆံု
အမျိုးသားဒီမုိကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ြငိမ်းချမ်းေရး နုိဘယ်ဆုရှင် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် နှင့် ြငိမ်းချမ်းေရးနုိဘယ်ဆုရှင် ေတာင်အာဖရိကမှ ဘုန်းေတာ်ြကီး ဒတ်စမွန်တူးတူး တုိ့ ေဖေဖါ်၀ါရီလ ၂၆ရက် မွန်းလွှဲ ၃ နာရီက ရန်ကုန်ြမို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစ
ြပည်ပ သတင်းစာ ဆရာများအား အေထွအေထွ အတွင်းေရးမှူး လက်ခံေတွ့ဆံု
​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ြပည်ပ သတင်း​စာ​ ဆရာ အဖွဲ့​အား​ ဆက်လက်​ေတွ့​ဆံု
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဩစေြတးလျ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးနှင့် အဖွဲ့အားေတွ့ဆံု
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးနှင့် တည်ြငိမ်ေအးချမ်းေရး ေကာ်မီတီေရးရာေဆာင်ရုံး( I. 12)တွင် အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ဧည့်သည်ေတာ် ဩစေြတးလျနုိင်ငံ နုိင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး ဦးေဆာင်ေသာ အဖွဲ့အား၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၀ရက် မွန်းလွဲ(၁၂)နာရီ (၃၀)မိနစ်က လက်ခံေ
Wednesday, 17 July 2013	Comments
ပထမအြကိမ် ြပည်သူ့လွှတ်ေတာ် သတ္တမပံုမှန်အစည်းအေ၀း ဆဌမေန့အစီအစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စု (၁၈)ရက်ြကာ ခရီးစဉ်မှ ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ေအာက်တိုဘာ(၄)ရက်၊ ည(၉)နာရီ(၅၅)မိနစ်တွင် ရန်ကုန်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သို့ ြပန်လည်ေရာက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဥက္ကဌအား အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးတင်ဦး၊အတွင်းေ
Friday,5October 2012	Comments
အဖွဲ့​ချုပ် အ​ေထွ​ေထွ အတွင်း​ေရး​မှူး​ မီး​ေဘး​ဒုက္ခသည်များ​အား​ သွား​ေရာက် အား​ေပး​
အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ေရစီ အဖွဲ့​ချုပ်၊​ ဒုတိယ-ဥက္ကဌ၊​ ဦး​တင်ဦး​နှင့်​ အ​ေထွ​ေထွ အတွင်း​ေရး​မှူး​၊​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်တို့​သည် ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် မဂင်္လာ​ေတာင်ညွန့်​ မီး​ေဘး​ ဒုက္ခသည်များ​ ခိုလှံု​ေနြကသည့်​ ပုသိမ်ြကီး​ရပ်က
Friday, 30 December 2011	Comments
မဂင်္လာဒံုြမို့နယ်၊ စည်းရံုးေရးအဖွဲ့ ပဲခူး ​ေရေဘး ဒုက္ခသည်များသို့ သွားေရာက်လှူဒါန်း
ရန်ကုန်ြမို့၊ တာေမွြမို့နယ် အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ်ရံုးတွင် ယံုြကည်ချက်ေြကာင့် အကျဉ်းကျခံေနြခင်းမှ ​ြပန်လည်လွတ်ေြမာက်​ လာြကသူများအား ဂုဏ်ြပုေတွ့ဆံုပွဲကို​ ​ဇန်​န​ဝါ​ရီ​လ​ ​၂၉​ ​ရက်​ေန့​တွင်​ ကျင်းပခဲ့​သည်။ နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် အခ
Monday, 30 January 2012	Comments
မဂင်္လာေတာင်ညွန့် မီးေလာင်ေပါက်ကွဲမှု တလြပည့်အလှူ
မဂင်္လာေတာင်ညွန့် မီးေလာင်ေပါက်ကွဲမှု တလြပည့် အထိမ်းအမှတ်အြဖစ် ရန်ကုန်ြမို့ မဂင်္လာေတာင်ညွန့်ြမို့နယ်၊ မဟာဝိဇယာရာမ ​ေကျာင်းတိုက်၊ ​ေဘာဇန သုခကာရီ ဆွမ်းစားေကျာင်းတွင် ​ေကျာင်းတိုက် ပဓါန ဆရာေတာ် ဦးပဦတ္တနှင့် တကွ သံဃာေတာ် ၁၁ ပါးတို့
Shoe Gallery Customer များ၏ တတိယအိမ်ေြမာက် စုေပါင်းအလှူ​ေငွေပးအပ်ပွဲ လွတ်လပ်ြခင်း အနုပညာ ရုပ်ရှင်ပွဲေတာ် ဖွင့်ပွဲ
အမျုိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌကို မစ္စတာ ဗီေဂျးနမ်ဘီယားေတွ့ဆံု
အမျုိးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ကမာ္ဘ ့ကုလသမဂ္ဂအေထွေထွ အတွင်းေရးမှူးချုပ်၏ ြမန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ဗီေဂျးနမ်ဘီယားအား ရန်ကုန်ြမို့ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း ေနအိမ်တွင် ေဖေဖါ်ဝါရီလ (၁၇) ရက်ေန့ ညေန ၅ နာရီ၌ လက
Friday, 17 February 2012	Comments
လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ ကိုယ်စား​လှယ် မစ္စတာ ကင်တာနား​ကို ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် လက်ခံ​ေတွ့​ဆံု
ကုလသမဂ္ဂ အထူးအြကံေပး အရာရှိ အမျုိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ​ေတွ့ဆံု
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ အေမရိကန်ြပည်ေထာင်စုသို့ ထွက်ခွာ
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် အေမရိကန် အစိုးရ၏ ဖိတ်ြကားချက်အရ စက်တင်ဘာလ (၁၆)ရက်ေန့ ညေန (၇)နာရီ (၄၅)မိနစ်တွင် TG-306 ထိုင်းေလေြကာင်းလိုင်းနှင့် ရန်ကုန်အြပည် ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်ကို အဖွဲ့ချုပ်န
Sunday, 16 September 2012	Comments
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် မေလးရှား ဝန်ြကီးချုပ်ေဟာင်းနှင့် ​ေတွ့ဆံု
အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အေထွေထွ အတွင်းေရးမှူး ​ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်သည် ​ြမန်မာနိုင်ငံသို့ (၂) ရက်ြကာ လာေရာက် လည်ပတ်ေနေသာ မေလးရှား ဝန်ြကီးချုပ်ေဟာင်း မဟာသီယာ မိုဟာမက်နှင့် နိုဝင်ဘာ (၃) ရက် ညေန(၄)နာရီတွင် ရန်ကုန်ြမို့ ဆူးေလ ဘုရားလမ်းရှိ က
Friday,4November 2011	Comments
အင်ဒိုနီးရှား၊ နိုင်ငံြခားေရး ဝန်ြကီးအား ​ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် လက်ခံေတွ့ဆံု ဖိလစ်ပိုင် သံအမတ်ြကီး​ ပန်း​ချီြပပွဲ ြကည့်​ရှုအား​ေပး​
ဧရာဝတီတိုင်း၊ လပွတ္တာြမို့နယ်၊ ြမို့နယ် စည်းရံုးေရးအဖွဲ့၏ အစီအစဉ်ြဖင့်၊ ​ြမို့နယ်စည်းရံုးေရးအဖွဲ့ တွဲဘက် အတွင်းေရးမှူး ပန်းချီဆရာ ဦးစိန်သန်းမှ ဦးေဆာင်ြပီး ​ြမို့မ (၉) ရပ်ကွက်၊ (၆) လမ်းရှိ ​ေနအိမ်တအိမ်တွင် ​ေအာက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်ေန့မှ (၁၇) ရက်
Tuesday, 8 November 2011	Comments
ေကာ့ေသာင် ြမို့နယ်တွင် ဥပေဒ သင်တန်းနှင့် အဂင်္လိပ် စကားေြပာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
ခရမ်းြမို့နယ်တွင် အေမ့ရိပ် အခမဲ့စာသင်ေကျာင်းဖွင့်လှစ်
တနသင်္ာရီတိုင်း၊ ေကာ့ေသာင် ြမို့နယ် အမျုိးသားဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့၀င်များ၏ ​ြပည်သူ့​အကျုိးြပု လုပ်ငန်းများ
အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်၊ တနသင်္ာရီတိုင်း၊ ေကာ့ေသာင်းြမို ့မှ လူထ
Wednesday, 23 February 2011	Comments
၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်ေန့ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ဒဂံုြမို့သစ်ြမို့နယ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် ြမို့နယ်စည်းရံုးေရး ေကာ်မတီ၏ ဦးေဆာင်မှုြဖင့် ြမို့နယ် အလုပ်ေကာ်မတီမှ ဦးစီးေဆာင်ရွက်ေသာ အခမဲ့ ေဆးခန်းဖွင့်ပွဲကို ဒဂံုြမို့သစ် ေတာင်ပိုင်းြ
Tuesday, 22 March 2011	Comments
မတရား လယ်ေြမသိမ်း၊ ဖမ်းဆီးခံ လယ်သမား ၅ ဦး အကျဉ်းေထာင်မှ လွတ်​ေြမာက်
မေကွးတိုင်း၊ ကံမြမို့နယ်၊ စစ္စကန်ေကျးရွာမှ လယ်ေြမများကို မတရား သိမ်းဆည်း ခံရြပီးေနာက် မတရား ​ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရေသာ လယ်သမားြကီး ဦးသန်းဦး၊ ဦးထွန်းမင်းလွင်၊ ဦးေအာင်လင်း၊ ဦးခင်ေမာင်စန်းနှင့် ဦးေကျာ်ညွှန့်တို့ ၅ ဦးသည် သရက်ခရိုင်၊ တရားရံုး၏ စီရင်ဆံုးြဖတ
Thursday, 30 June 2011	Comments
ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည် ​ေနအိမ်တွင် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ​ြပည်ေထာင်စုေန့ ညစာစားပွဲ ကျင်းပ ​၆၅​ ​နှစ်​ေြမာက်​ ​ြပည်ေထာင်စုေန့ အထိမ်းအမှတ် ညစာစားပွဲကို ရန်​ကုန်​ြမို့​​၊​​ ​အ​မှတ်​ ၅၄ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ၊ ​ေဒါ်ေအာင်​ ဆန်းစုြကည်​၏ ​ေနအိမ်တွင် ၂၀၁၂ခု​နှစ် ​ေဖေဖါ်ဝါရီလ ၁၂​ ​ရက်​ေန့​ ည
Monday, 13 February 2012	Comments